Ngamawebhusayithi angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezi-Inthanethi namuhla, njengomnikazi wesinye salezo zingosi, ungase ucabange ukuthi akusikho amathuba amaningi ukuthi kungenzeka ukuthi i-cybercriminal ingase ihlose. Kodwa-ke, ngaphambi kokuba sifinyelele kulokho, ake sibuyele emuva okwesikhashana bese sicabanga ukuthi iwebhusayithi yakho itho ukuthini kuwe.
Njengomuntu, ungase ube ngumnikazi iwebhusayithi yomuntu siqu of ngisho nebhizinisi elincanyana ku-intanethi ukuthi ucabanga ukuthi ayinaki. Kunenani kukho konke futhi ngisho nesayithi elincanyana lithatha uhlobo oluthile lwedatha. Mhlawumbe igama lokungena ngemvume nephasiwedi oyisebenzisayo kuwo wonke ama-akhawunti wakho we-intanethi? Uma unomabhizinisi amancane, iwebhusayithi yakho imelela umkhiqizo wakho nedumela lakho, kanye namathani olwazi oluyigugu okungelona olwakho kuphela, kodwa namakhasimende akho.
Uma uhlangabezane nezihloko ezivela Forbes, The Economist noma nanoma iyiphi inamba yezinkampani zokuphepha ze-Inthanethi namuhla, kungenzeka ukuthi uyazi igama elithi ‘Idatha yi-Amafutha amasha’. Kube yinye yezinto eziyigugu kakhulu ezitholakalayo ku-intanethi namuhla (futhi ngakho-ke sibona ukuphakama kweVPN) futhi njenganoma yini, kungabelwa futhi kuthengiswe noma kuhanjiswe.
Isithombe sesikweletu: David Parkins
Abakwa-Cybercriminelen hebben geen banakekele uma iwebhusayithi yakho encane, basebenzisa amathuluzi ahlola ngokukhululekile yonke indawo abayithola, eqoqa ulwazi kuphela. Uma bengakwazi ukusebenzisa ulwazi, bangayithengisa njalo komunye umuntu ongakwazi.
Njengoba iningi lethu lingabanikazi futhi silondoloze imishini esibhekene nayo kumawebhusayithi ethu, sizobe sibheka izici ezingezona zomzimba zokuphepha kwewebhu. Lokhu kuhilela izindawo ezimbili eziyinhloko; I-1) ukuthola i-website ngokwalo ne-2) ukuthola idatha amakhasimende akho akunikeza yona.
Khumbula ukuthi noma ubani ovakashela isayithi lakho angabhekwa njengamakhasimende, hhayi nje labo abenza ukuthenga kusuka kuwe.
1 I-1. Gcina ama-scripts akho namathuluzi osesikhathini
2 I-3. Sebenzisa i-HTTPS ne-SSL
2.1 Ukuphepha kwe-7 DDoS I-SSL Cert. Ukusekela Isivivinyo samahhala izinsuku 30 izinsuku 30 izinsuku 30 Vakashela ku-intanethi: Incapsula.com I-3. I-Cloudflare
I-1. Gcina ama-scripts akho namathuluzi osesikhathini
Qinisekisa ukuthi isiteji sakho sesayithi nanoma yimaphi amanye ama-scripts osebenzayo asesikhathini. Yonke isofthiwe eyaziwa esintu ishicilelwe nge-bugs kanye nezindawo zokuphepha ezikhona. Ngisho nalabo abagcinwe olusha bazoba nalezi zinhlawulo. Konke okudingekayo kungengozini eyodwa kanye nabakwa-cybercriminelen bazokwazi ukufinyelela. Ngokuqinisekisa ukuthi wenza izibuyekezo ezijwayelekile, amathuba okuvikeleka okuvikelekile asetshenziswayo anciphisa.
Lokhu kubaluleke kakhulu kulabo abasebenzisa amathuluzi ewebhu okuyiwona mthombo ovulekile. Ngokwemvelo yabo, amathuluzi avulekile avela ezingozini kulabo abafuna ukuxhaphazwa. Ukulwa nalokhu, kunamathuluzi amaningi ongawasebenzisa ukukusiza ukuhlola.
Ukuze uqale ukuphuma, zama LastPass, Dashlane of KeePass. Ezinye zikhululekile, ezinye azikho.
I-3. Sebenzisa i-HTTPS ne-SSL
Abantu abaningi namanje abakwazi kakhulu i-HTTP ne-SSL, kodwa njengomnikazi wesayithi lokhu kubalulekile.
Kulabo abasebenzisa izitolo ze-inthanethi noma ukwenza noma yikuphi uhlobo lokuthengiselana kwamakhasimende akho ku-intanethi, i-SSL ayikhethanga ngokuzithandela. Izitifiketi ze-SSL zingatholakala emithonjeni eminingi kodwa ukubheja kwakho okuhle ukuthola omunye kumhlinzeki ohloniphekile onjengoba I-SSL.com.
Ngaphandle kwalokho, abaningi abahlinzeki be-web hosting ezifana A2Hosting futhi SiteGround futhi usebenze njengomthengisi wesithathu futhi ungabathengisa kuwe.
I-Digicert ngokukhethekile izitifiketi ze-SSL futhi inezinketho ezehlukene ezitholakalayo
Uma uqala nje, vumela umhlinzeki wakho we-web hosting ukuthi uyahlose ukuqala isayithi ye-eCommerce futhi kungenzeka ukuthi bazoba ne-iphakheji yokuthenga ehlanganisa konke okudingayo. Chofoza lapha ukuze ubone uhlu olubanzi lwe-WHSR lwabaningi abangabamba amawebhusayithi.
Ngesinye isikhathi, ngisho noma ungaqhubeki isayithi le-eCommerce, izinkampani zewebhu namuhla zifuna ukuphepha.
Ngokwesibonelo, I-Google manje isebenzisa i-HTTPS njengesignali yesimo. Ngokwenza lokhu, basiza ukuqinisekisa ukuthi abantu abasebenzisa injini yabo yokusesha bazoqondiswa kumawebhusayithi aphephile futhi aphephile.
Ngisho namanye amawebhusayithi e-banki awavikelekile futhi iziphequluli eziningi manje ziyabona lokhu!
Ukuphepha kwe-7 DDoS
I-SSL Cert. Ukusekela
Isivivinyo samahhala izinsuku 30 izinsuku 30 izinsuku 30
Vakashela ku-intanethi: Incapsula.com
I-cloudflare iyaziwa kakhulu idumela njenge-Content Distribution Network (i-CDN), futhi ngokuyinhloko ukuthi yakha kanjani igama eliqinile ekuqinisekeleni amasayithi amaklayenti ngokuhlaselwa kwe-Distributed Denial of Service (DDoS). Kanti, njenge-Incapsula, ama-Cloudflare amanani wezinkokhelo angcono kakhulu.
Ngamawebhusayithi angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezi-Inthanethi namuhla、njengomnikazi wesinye salezo zingosi、ungase ucabange ukuthi akusikho amathuba amaningi